ဒီ RAP ကသင့်ကိုပိုပြီးပါးလွှာစေပါလိမ့်မယ် subtitles April 03, 2020
ဒီ RAP ကသင့်ကိုပိုပြီးပါးလွှာစေပါလိမ့်မယ် subtitles
Chris Turner @clublinks
- ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကဒီမှာပါ ဒီမှာဒီအပိုင်းကို၏, ရက်ပ်ဘာအကြောင်းကြားချင်လဲ - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များ။ - ထိုရက်သတ္တပတ်၏ရက်ပေါင်း? (ပရိသတ်ကရယ်သည်) အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံပြုချက်ပါတကား! Mate, ဒါရုံ, ငါတို့နှာခေါင်းအောက်မှာပဲ! ငါကြိုက်တယ်အေးတယ်။ Fuckin ကလူတိုင်းကမုန်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မှားနေတယ် သူတို့က။ မင်းသိလား သောကြာနေ့ညဖြစ်တယ် သင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် 'ဘာဖြစ်လို့ငါကအမွေးထူတဲ့ဘောလုံးတွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပြောရတာလဲ။ ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒီမှာဒီမှာယောက်ျားတွေ၊ မင်းဘာအဓမ္မပြုကျင့်ချင်တာလဲ။ - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] Fallopian ပြွန်။ - အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းနှစ်ခုနှင့် fallopian ပြွန်နှစ်ခုရှိသည်။ ကျနော်တို့အရောင်များအမျိုးမျိုးကိုယူပါလိမ့်မယ်, fallopian ပြွန်၌တည်၏။ (ပရိသတ်ကရယ်သည်) - ငါသူတို့အားလုံးကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေသေချာတယ်မဟုတ်လား။ Cool ဒါ။ (ပရိသတ်ကရယ်သည်) ဖြစ်ကောင်း။ မင်းတို့တွေ့ခဲ့သလိုမျိုးမထုတ်ပစ်ပါနဲ့။ သငျသညျအဘယ်သူအားမျှ fallopian ပြွန်မြင်ကြပြီမဟုတ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကကြီးနေ၊ မဟုတ်ပါ။ အိုကေဒီရက်၏ရက်များ fallopian ပြွန်အတွက်အရောင်များ၏အပြောင်းအလဲ, fallopian ပြွန်ဘာတွေရှင်းပြနေကိုရပ်တန့်။ (ပရိသတ်ကရယ်သည်) အဘယ်အရာကို, အလယ်၌ယောက်ျားတွေ, သင်သည်အဘယ်သို့အကြောင်း rap လုပ်ချင်ပါသလဲ - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] မျက်နှာမကောင်းသောဆံပင်! - မျက်နှာမကောင်းတဲ့ဆံပင်။ စစ်ဆေးချင်တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုထောက်ပြနေတယ်မဟုတ်လား။ ငါ ... (ပရိသတ်ကရယ်သည်) ကောင်းပါတယ် uh, မျက်နှာမကောင်းတဲ့ဆံပင်, အဆိုးဆုံးဆံပင်ကဘာဖြစ်မလဲ။ - [ပရိတ်သတ်အဖွဲ့ဝင်] နှုတ်ခမ်းမွှေး။ - နှုတ်ခမ်းမွှေးလား။ အိုကေ ဆိုလိုတာကမင်းမှာဆိတ်သငယ်ကိုသွားရှာတယ် သင်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များ။ fallopian ပြွန်အတွက်အရောင်များ၏မူကွဲ။ ဒီမှာယောက်ျားတွေ, ယခုတိုင်အောင်ဤအချို့သောကြီးမြတ်အကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါကိုဆက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ - [ပရိသတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်] Axolotls ။ - Axolotls, ah! (ပရိသတ်ရွှင်လန်းမှု) - ခရစ်တော်ကိုယေရှုခိုးနေ၊ မင်းဘာမှားနေတာလဲ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျ Axolotl အသင်းဖြစ်ပါသည် Triple A yeah အချိန်အများကြီးပေးနေတာလား။ သူတို့ကတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအတော်လေးတိကျတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါကမျှတတဲ့အကြံပြုချက်လိုငါခံစားရတယ်။ တိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကလူတွေကိုပြောတာကိုပဲရပ်လိုက်ပါ တူခွေးနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယ။ axolotls ဆိုတာမင်းမသိဘူးဆိုရင်၊ သူတို့ကအပြီးအပိုင် Juvenile salamander ၏ကြင်နာအမျိုးအစား ဂူတွေကွန်ယက်မှာနေတယ်၊ ဗဟိုအမေရိကမှာပဲ၊ အထူးသဖြင့်၊ ငါမက္ကဆီကိုလို့ထင်တယ်။ ထိုအဟုတ်, သငျသညျ fuck ဆိုတဲ့ငါဒါသူတို့ကိုအကြောင်းကိုဝန်ကိုငါသိ၏, \_ t (ပရိသတ်ကရယ်သည်) လူတွေကမင်းကိုကြိုးစားဖမ်းစားတဲ့အခါငါဒါကိုနှစ်သက်တယ်၊ ပြီးတော့ငါနင်ငါ ၁၃ နှစ်တုန်းကပေါ့ \_ t ငါ axolotl တကယ်လိုချင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာသူငယ်ချင်းမရှိဘူး (ပရိသတ်ကရယ်သည်) - ဒီမှာယောက်ျားတွေ။ - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] Brexit! - ဘာ? - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] Brexit! Brexit ကအရမ်းသိသာထင်ရှားတဲ့အကြံပေးချက်တစ်ခုပါ။ ငါကစာသားအခုအချိန်မှာဖြစ်ပျက်သည်ကိုငါသိ၏, ဤကဲ့သို့သောနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်သည်။ ငါတို့ပြပွဲပြီးပြီ လက်ကိုကိုင်ပြီး Auld Lang Syne ကိုသီဆိုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် ကောင်းလိုက်တာ။ - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] အာကာသယာဉ်မှူးများ! - Lord Lucan နှင့်အာကာသယာဉ်မှူး။ အိုကေ, သခင်ဘုရား Lucan အာကာသယာဉ်မှူး။ အိုးလူ, သခင် Lucan သည်ဘယ်သူလဲသိလား (ပရိသတ်အော်) ကောင်းပြီသင်ရက်ပ်၌တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်လော (ပရိသတ်ကရယ်သည်) အိုကေ ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ ၂၀ လို axolotls ကိုသိတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကဗြိတိသျှသခင်လိုမျိုးပါပဲ ဘယ်သူကသူ့ဇနီးကိုသတ်တာလဲ၊ သူသည်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။ ဒီတော့ Lord Lucan အာကာသယာဉ်မှူး၊ axolotls နှုတ်ခမ်းမွှေးပါသည့်မျက်နှာဆိုးဆံပင်၊ fallopian ပြွန်များတွင်အရောင်များ၏ကွဲပြားမှု, နှင့်ရက်သတ္တပတ်၏ရက်ပေါင်း။ သူများသည်အချို့ Baller အကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့ဒါကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ဒါကပွဲချင်းပြီးလုပ်ထားတဲ့ရက်ပ်ပါ ဒါပေမယ့်ရေးထားတာမဟုတ်၊ ရေးထားတာလည်းမဟုတ်ပါ။ နောက်တဖန်မမြင်ရဖို့ဘယ်တော့မှမ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ shit လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး သင်ထင်လိမ့်မည် ငါ့သူငယ်ချင်းကိုရိုက်နှက်လိုက်တဲ့အတွက်ပျော်ရအောင်။ (ပရိသတ်ရွှင်လန်းမှု) ငါအတော်လေးအေးတဲ့ရက်ပ်ကိုရွေးလိုက်တယ်၊ အရမ်းစောလွန်းပြပွဲ။ (ရက်ပ်ရိုက်) before တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောရက်ပ် the ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးနေ့သည်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်သည် Norse ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Thor the Norse ဘုရားသခငျ♪ ♪သူ့ကိုနာမည်ပေးပြီး say ငါပြောတယ်♪aရက်စွဲတစ်ခုသို့ပြန်သွားပါ၊ Odin's day ရပြီ♪ Wednesday ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ why elled စာလုံးပေါင်းဖော်ပြထားသည် so after လပြီးနောက်အမည်ရှိသောတနင်္လာနေ့သည်ကြီးမားသောအကွာအဝေး♪ ♪တနင်္ဂနွေနေရောင် Saturn ♪ဂြိုလ်ဂြိုဟ် Sat ♪ Friday အင်း၊ ဒါပေမယ့်သောကြာနေ့ happened ဖြစ်ခဲ့တယ် ♪ဒါကအကြမ်းဖက်မှုရဲ့နောက်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Freya ♪ last နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းကဘာလဲ၊ ငါနှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်♪ those ငါတို့အားလုံးပြုခဲ့ပါတယ်၊ Norse သီတင်းပတ်၏နေ့ရက်များကိုရေတွက်နေသော Norse Valhalla ♪ ♪ဒါက ၇ is ♪ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည်နေ့ရက်ဖြစ်သည် ♪ငါမကိုင်နိုင်ဘူး♪ calendar ကျွန်ုပ်ပြက္ခဒိန်တွင်၎င်းကိုအမြဲတမ်းဖြတ်ကျော်သည် ♪ငါမလိုချင်ဘူး♪ ♪အိုး၊ ကျွန်ုပ်အင်္ဂါနေ့၊ ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည် remember ငါ့ကိုလာခွင့်ပေးပါ ♪လက်တစ်ဖက်ကို sever ဖြတ်ပစ်ပါ ♪ဤအရာသည်ဘုရားသခင်ပြသခဲ့သည်♪ ♪လူများကသူ့ကိုမေ့သွားကြသည် ♪ငါနင့်ကိုဆိ kid ♪ TYR သည် Tyr ၏နေ့ရက်ဖြစ်သည် fun ပျော်စရာများစွာ ရှိ၍ လက်ကိုကိုင်။ ay ay ♪ Norse ဘယ်သူကမှ Norse နတ်ဘုရားတွေကိုမကြိုက်ဘူး♪ ♪သို့သော်ထိုသို့မထူးဆန်း not ♪ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်သည်။ ♪ ♪ငါ are ငုံ့ကြည့်♪ ♪ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းခွံအနည်းငယ်ရရှိသည် ♪ပြီးတော့ငါကလိင်အင်္ဂါတွေအထက်မှာထည့်တယ် the ငါဘက်လှည့်ကြည့်နေတယ်၊ ​​ဟုတ်တယ်ငါဒီကိုဖြတ်ကြည့်တယ်♪ ♪၎င်းသည်သားအိမ်တွင်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည် the ငါဘက်ခြမ်းကိုကြည့်လိုက်တော့ငါအရမ်းပျော်တယ်♪ egg ကြက်ဥကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့်အရာနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည် the Ovary ထဲမှ♪ ♪ဒါက fallopian tube ♪ it ၎င်းအတွင်းထဲသို့ ၀ င်သွားသည့်အရာသေချာစေရန်♪ think မင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် ♪ဒါတွေအားလုံးကယောနိဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး♪ငါထင်တယ် ♪အံ့သြစရာကောင်း♪ ♪အချို့သည်မှိုင်း။ အချို့မှာတောက်ပကြသည် ♪အချို့သည်ပန်းရောင် are ဖြစ်သည် ♪အချို့သည်ခရမ်းရောင် are ဖြစ်သည် ♪အချို့သည်မှိုင်းညို♪ဖြစ်သည် ♪ဒါကတော်တော်နာပါတယ်♪ your အကယ်၍ သင်၏ fallopians သည် beige-y ဖြစ်ပါက♪ hor စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ still နေဆဲ ♪သူတို့သည်ကလေးများမွေးစ♪ right ဒါမှန်တယ်♪ ♪ထိုအခါသင်သည်ထိုအရပ်မှသူတို့ကိုထုတ်တွန်း♪ the ကလေးမွေးဖွားသောအခါမျက်နှာဆံပင်မရှိ။ ♪ did အကယ်၍ ထိုသို့ပြုပါကသင်သည်၎င်း၏မျက်နှာကိုရိတ်လိုက်လိမ့်မည်♪ that နှုတ်ခမ်းမွှေးရှိကလေးငယ်တစ်နေရာ in the နှုတ်ခမ်း၊ အာခေါင်မှာ on ♪မင်းကဘယ်သူလဲ Whoa, မွေးကင်းစကလေး၊ ချွတ်ယူ၊ Bic နည်းနည်းယူပါ♪ front ရှေ့မှောက်၌သင်တုန်း♪ lip နှုတ်ခမ်းကိုမခွဲမခွာ♪ ♪ဟုတ်ကဲ့၊ ♪ကလေးကို Adolf Hitler ကဲ့သို့ made ငါဖန်တီးခဲ့♪ Hit ဟစ်တလာသည်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုအဘယ်ကြောင့်ရရှိခဲ့သနည်း။ ♪ he သူငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလား။ ♪ ♪ဒီတစ်ခါလည်းဖြစ်ကောင်း♪ ♪ဟုတ်တယ် highly အလွန်အမင်းညှစ်ထားခံရသည် feel သခင်ယေရှုသည်ကလေးထိန်းကိုသတ်သောအခါပညတ်တရားမှထွက်ပြေးသောသခင်ကဲ့သို့ပင် running ♪ ah about about about about about about about about about me me you ♪♪ you about about♪ me about♪ about about about ♪♪ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့သိတယ်မင်းငါ့ကိုနားမလည်ဘူး♪ Luc Lord Lucan, ခိုးမှုမဟုတ်ဘဲ lootin '♪ ♪သူသည် Luton ထံမှရထားပေါ်တွင်ထွက်ပြေးခဲ့သည် ♪ဒါကလန်ဒန်အခြေစိုက်ဘူတာရုံတစ်ခု Cape Cape Canaveral သို့♪သွားခဲ့သည် ♪ဟုတ်တယ်၊ ♪တံခါးပေါက်မှတဆင့်♪ n anny ဒီထိန်းကို glass ပြောပြီး glass သူမမျက်မှန်ခတ်လိုက်သည် ♪ဒါကြောင့်ငါဒီမှာ NASA ဖို့စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည် ♪ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကိုလွန်းပျံယာဉ်အာကာသထဲခေါ်သွား♪♪ because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ trouble ငါတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ် ♪ထိန်းသည်သွေးအိုင်ထဲ၌♪ရှိနေသည် ♪ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ငါ့သားအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည် the ပြီးတော့၊ သခင်၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီထိန်းကိုသတ်ပစ်ရတာလဲလို့မေးလိုက်တယ် ♪ဒါပေမယ့်ငါသွားပြီ♪ ♪ငါထွက်ပြေးသွားပြီး Lord အများကြီးက kiwi အဆိုတော်လို♪ space ယခုငါအာကာသထဲရောက်နေပြီ ♪ ကျေးဇူးပြု၍ အစားအစာအားလုံးကိုယူလာပြီး♪လာပေးပါ ♪ပြီးတော့ငါလိုအပ်တဲ့အာဟာရများကို ISS ဆီသို့♪ ♪ကျွန်ုပ်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလောဘကြောင့်ကျွန်ုပ်အားသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် killed အသတ်ခံရရန်လိုအပ်သည် Lord ကျွန်ုပ်သည် Lord Damon Hill ကတည်းကအဆိုးဆုံးသခင်♪ ♪သူသည်ပြိုင်ကားမောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည် he သူသည်သခင်ဖြစ်လာသည်ဟုမထင်ပါ။ ♪ Alan Lord Alan Sugar ကပြောနိုင်သည် ♪ငါ adored ခံရလိမ့်မယ်♪ this ဤအပိုင်းရှိယောက်ျားများမှမင်းထံမှနောက်ဆုံးဘာက♪? me ငါ့ကိုပြန်လှည့်စားပါ ♪ရေပေါ်မှသေးငယ်သောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ် see မြင်သည်aမြွေကဲ့သို့ကြည့်ပါ ♪ဒါပေမယ့်ခြေထောက်သေးသေးလေးတွေရှိတယ်♪ Mexico မက္ကဆီကိုမှကျွန်ုပ်ယူလိုသည်ကိုသင်သိသည် export သူတို့တင်ပို့ဖို့တရားမဝင်ဘူး illegal I အကယ်၍ ရှာတွေ့လျှင်ကျွန်ုပ် fuckin လိမ့်မည် 'you သင်အစီရင်ခံပါ they're 'သူတို့အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ် ause ♪ငါအတော်လေးလိမ္မာသောခံစားရတယ်♪ these ကျွန်ုပ်သည်ဤသေးငယ်သောသေးငယ်သောအရာငယ်များကိုသိသောကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည် ♪အချို့သည်အနက်ရောင်နှင့်အချို့သည်အဖြူရောင်♪ ♪သူတို့မှာမျက်စိကန်းသောအမြင်ရှိသည် night ညသန်းခေါင်ယံ♪ ♪သူတို့သည်ငါးနှင့်မတူ♪ ♪သို့သော်၎င်းတို့သည်ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများနှင့်မတူပါ။ ♪ g ဟုတ်တယ်၊ ပါးဟက်လေးများနှင့်သူတို့၏ခြေလက်များကိုကြည့်ပါ ♪သူတို့က feathery red ပုံစံမျိုး they သူတို့မှာ Quills နည်းနည်းလေးနဲ့တူတယ်♪ their သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ♪aကျွန်ုပ်သည်အပြုံးတစ်ခု (ကလေးကိုသိသာထင်ရှားစွာရည်ညွှန်းလိုသော) ဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်အရမ်းကြိုက်ရတာလဲ like ♪ငါ axolotls ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ် ye the ကလေးအားကြည့်ရှုပါ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြုံးသင့်သည်။ ♪) ♪သူတို့သည် quokka ကဲ့သို့အမြဲပြုံးနေကြသည် ♪ဒါဆိုငါပုလင်းနှင့်အတူမက္ကဆီကိုကိုသွားမယ် ♪ကျွန်ုပ်ဂူသို့လမ်းလျှောက်သွားပြီး in တွင်စမ်းကြည့်ပါ ♪ပြောပါ၊ axolotl နည်းနည်းလေးသာပြောလိုက်ပါ။ in ♪ပြီးတော့ရေကူးမယ် then ပြီးတော့ငါတိုင်းပြည်ထဲကပို့။ ♪bကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းထဲတွင်မည်သို့ထည့်ထားသနည်း security လုံခြုံရေးမှတစ်ဆင့် w ၀ တ်စားဆင်ယင်♪ it အဲဒါကိုပြန်ယူပါ ♪ဒါကငါ့ကိုကြည့်တာ♪ ♪ငါခေါင်းကိုပတ်လိုက်တာ♪ great မင်းပြောတာကမင်းကြီးတယ် great then ပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးကြင်ဖော် - Lord Lucan round ပတ်ပတ်လည်ကိုဖိတ်ခေါ်မယ် ♪အဲဒီမှာမင်း go သွားပါ ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ playlists နှင့်ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။ ဒီမှာယူပါ လိုပဲမှတ်ချက်ပေးသူအပေါငျးတို့အမှုအရာ။ အော်ကြပြီ!
ဒီ RAP ကသင့်ကိုပိုပြီးပါးလွှာစေပါလိမ့်မယ်
<text sub="clublinks" start="0" dur="1.443"> - ပြီးတော့ဒီအပိုင်းကဒီမှာပါ </text>
<text sub="clublinks" start="1.443" dur="1.264"> ဒီမှာဒီအပိုင်းကို၏, </text>
<text sub="clublinks" start="2.707" dur="1.806"> ရက်ပ်ဘာအကြောင်းကြားချင်လဲ </text>
<text sub="clublinks" start="5.98" dur="1.11"> - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="7.09" dur="0.975"> - ထိုရက်သတ္တပတ်၏ရက်ပေါင်း? </text>
<text sub="clublinks" start="8.065" dur="0.833"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="8.898" dur="2.012"> အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကြံပြုချက်ပါတကား! </text>
<text sub="clublinks" start="10.91" dur="2.16"> Mate, ဒါရုံ, ငါတို့နှာခေါင်းအောက်မှာပဲ! </text>
<text sub="clublinks" start="13.07" dur="1.59"> ငါကြိုက်တယ်အေးတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="14.66" dur="1.22"> Fuckin ကလူတိုင်းကမုန်းတယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="15.88" dur="0.833"> ဒါပေမဲ့သူတို့မှားနေတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="16.713" dur="1.047"> သူတို့က။ </text>
<text sub="clublinks" start="17.76" dur="1.01"> မင်းသိလား </text>
<text sub="clublinks" start="18.77" dur="0.833"> သောကြာနေ့ညဖြစ်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="19.603" dur="0.833"> သင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="20.436" dur="2.464"> 'ဘာဖြစ်လို့ငါကအမွေးထူတဲ့ဘောလုံးတွေဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပြောရတာလဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="22.9" dur="0.833"> ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="23.733" dur="2.692"> ဟုတ်ပြီ၊ ဒီမှာဒီမှာယောက်ျားတွေ၊ မင်းဘာအဓမ္မပြုကျင့်ချင်တာလဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="26.425" dur="1.185"> - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] Fallopian ပြွန်။ </text>
<text sub="clublinks" start="27.61" dur="3.43"> - အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းနှစ်ခုနှင့် fallopian ပြွန်နှစ်ခုရှိသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="31.04" dur="3.19"> ကျနော်တို့အရောင်များအမျိုးမျိုးကိုယူပါလိမ့်မယ်, </text>
<text sub="clublinks" start="34.23" dur="1.354"> fallopian ပြွန်၌တည်၏။ </text>
<text sub="clublinks" start="35.584" dur="2.113"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="37.697" dur="2.423"> - ငါသူတို့အားလုံးကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေသေချာတယ်မဟုတ်လား။ </text>
<text sub="clublinks" start="40.12" dur="0.856"> Cool ဒါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="40.976" dur="1.164"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="42.14" dur="1.43"> ဖြစ်ကောင်း။ </text>
<text sub="clublinks" start="43.57" dur="1.16"> မင်းတို့တွေ့ခဲ့သလိုမျိုးမထုတ်ပစ်ပါနဲ့။ </text>
<text sub="clublinks" start="44.73" dur="2.44"> သငျသညျအဘယ်သူအားမျှ fallopian ပြွန်မြင်ကြပြီမဟုတ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="47.17" dur="2.09"> ကျွန်တော့်ငပဲကကြီးနေ၊ </text>
<text sub="clublinks" start="49.26" dur="0.833"> မဟုတ်ပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="51.67" dur="1.38"> အိုကေဒီရက်၏ရက်များ </text>
<text sub="clublinks" start="53.05" dur="2.25"> fallopian ပြွန်အတွက်အရောင်များ၏အပြောင်းအလဲ, </text>
<text sub="clublinks" start="55.3" dur="1.668"> fallopian ပြွန်ဘာတွေရှင်းပြနေကိုရပ်တန့်။ </text>
<text sub="clublinks" start="56.968" dur="2.562"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="59.53" dur="1.98"> အဘယ်အရာကို, အလယ်၌ယောက်ျားတွေ, သင်သည်အဘယ်သို့အကြောင်း rap လုပ်ချင်ပါသလဲ </text>
<text sub="clublinks" start="61.51" dur="0.89"> - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] မျက်နှာမကောင်းသောဆံပင်! </text>
<text sub="clublinks" start="62.4" dur="1.88"> - မျက်နှာမကောင်းတဲ့ဆံပင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="64.28" dur="1.73"> စစ်ဆေးချင်တယ်၊ ဒါကငါ့ကိုထောက်ပြနေတယ်မဟုတ်လား။ </text>
<text sub="clublinks" start="66.01" dur="0.927"> ငါ ... </text>
<text sub="clublinks" start="66.937" dur="0.833"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="67.77" dur="0.833"> ကောင်းပါတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="68.603" dur="0.833"> uh, မျက်နှာမကောင်းတဲ့ဆံပင်, </text>
<text sub="clublinks" start="69.436" dur="1.937"> အဆိုးဆုံးဆံပင်ကဘာဖြစ်မလဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="72.806" dur="0.833"> - [ပရိတ်သတ်အဖွဲ့ဝင်] နှုတ်ခမ်းမွှေး။ </text>
<text sub="clublinks" start="73.639" dur="0.941"> - နှုတ်ခမ်းမွှေးလား။ </text>
<text sub="clublinks" start="74.58" dur="0.833"> အိုကေ </text>
<text sub="clublinks" start="75.413" dur="1.947"> ဆိုလိုတာကမင်းမှာဆိတ်သငယ်ကိုသွားရှာတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="77.36" dur="1.86"> သင်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="79.22" dur="1.93"> နှုတ်ခမ်းမွှေး၊ </text>
<text sub="clublinks" start="81.15" dur="0.833"> ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်များ။ </text>
<text sub="clublinks" start="81.983" dur="2.447"> fallopian ပြွန်အတွက်အရောင်များ၏မူကွဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="84.43" dur="2.24"> ဒီမှာယောက်ျားတွေ, ယခုတိုင်အောင်ဤအချို့သောကြီးမြတ်အကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="86.67" dur="1.123"> ဒါကိုဆက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="87.793" dur="1.036"> - [ပရိသတ်ကိုအဖွဲ့ဝင်] Axolotls ။ </text>
<text sub="clublinks" start="88.829" dur="1.388"> - Axolotls, ah! </text>
<text sub="clublinks" start="90.217" dur="1.233"> (ပရိသတ်ရွှင်လန်းမှု) </text>
<text sub="clublinks" start="91.45" dur="2.83"> - ခရစ်တော်ကိုယေရှုခိုးနေ၊ မင်းဘာမှားနေတာလဲ </text>
<text sub="clublinks" start="94.28" dur="1.98"> မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျ Axolotl အသင်းဖြစ်ပါသည် </text>
<text sub="clublinks" start="96.26" dur="2.56"> Triple A yeah အချိန်အများကြီးပေးနေတာလား။ </text>
<text sub="clublinks" start="98.82" dur="1.2"> သူတို့ကတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပါ၊ </text>
<text sub="clublinks" start="101.12" dur="2.12"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအတော်လေးတိကျတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုပါပဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="103.24" dur="2.06"> ဒါကမျှတတဲ့အကြံပြုချက်လိုငါခံစားရတယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="105.3" dur="1.23"> တိရစ္ဆာန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကလူတွေကိုပြောတာကိုပဲရပ်လိုက်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="106.53" dur="1.34"> တူခွေးနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယ။ </text>
<text sub="clublinks" start="107.87" dur="1.32"> axolotls ဆိုတာမင်းမသိဘူးဆိုရင်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="109.19" dur="3.2"> သူတို့ကအပြီးအပိုင် Juvenile salamander ၏ကြင်နာအမျိုးအစား </text>
<text sub="clublinks" start="112.39" dur="1.58"> ဂူတွေကွန်ယက်မှာနေတယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="113.97" dur="2.64"> ဗဟိုအမေရိကမှာပဲ၊ အထူးသဖြင့်၊ ငါမက္ကဆီကိုလို့ထင်တယ်။ </text>
<text sub="clublinks" start="116.61" dur="2.171"> ထိုအဟုတ်, သငျသညျ fuck ဆိုတဲ့ငါဒါသူတို့ကိုအကြောင်းကိုဝန်ကိုငါသိ၏, \_ t </text>
<text sub="clublinks" start="118.781" dur="1.739"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="1.74"> လူတွေကမင်းကိုကြိုးစားဖမ်းစားတဲ့အခါငါဒါကိုနှစ်သက်တယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="122.26" dur="1.65"> ပြီးတော့ငါနင်ငါ ၁၃ နှစ်တုန်းကပေါ့ \_ t </text>
<text sub="clublinks" start="123.91" dur="1.16"> ငါ axolotl တကယ်လိုချင်တယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="125.07" dur="1.436"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာသူငယ်ချင်းမရှိဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="126.506" dur="1.844"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="128.35" dur="1.1"> - ဒီမှာယောက်ျားတွေ။ </text>
<text sub="clublinks" start="129.45" dur="0.833"> - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] Brexit! </text>
<text sub="clublinks" start="130.283" dur="0.833"> - ဘာ? </text>
<text sub="clublinks" start="131.116" dur="0.833"> - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] Brexit! </text>
<text sub="clublinks" start="131.949" dur="1.331"> Brexit ကအရမ်းသိသာထင်ရှားတဲ့အကြံပေးချက်တစ်ခုပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="133.28" dur="1.99"> ငါကစာသားအခုအချိန်မှာဖြစ်ပျက်သည်ကိုငါသိ၏, </text>
<text sub="clublinks" start="135.27" dur="1.8"> ဤကဲ့သို့သောနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်သည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="137.07" dur="0.85"> ငါတို့ပြပွဲပြီးပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="137.92" dur="1.98"> လက်ကိုကိုင်ပြီး Auld Lang Syne ကိုသီဆိုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="139.9" dur="1.867"> ကောင်းလိုက်တာ။ </text>
<text sub="clublinks" start="141.767" dur="1.473"> - [ပရိသတ်အဖွဲ့ဝင်] အာကာသယာဉ်မှူးများ! </text>
<text sub="clublinks" start="143.24" dur="1.44"> - Lord Lucan နှင့်အာကာသယာဉ်မှူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="144.68" dur="3.14"> အိုကေ, သခင်ဘုရား Lucan အာကာသယာဉ်မှူး။ </text>
<text sub="clublinks" start="147.82" dur="2.418"> အိုးလူ, သခင် Lucan သည်ဘယ်သူလဲသိလား </text>
<text sub="clublinks" start="150.238" dur="0.852"> (ပရိသတ်အော်) </text>
<text sub="clublinks" start="151.09" dur="1.639"> ကောင်းပြီသင်ရက်ပ်၌တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်လော </text>
<text sub="clublinks" start="152.729" dur="1.971"> (ပရိသတ်ကရယ်သည်) </text>
<text sub="clublinks" start="154.7" dur="0.833"> အိုကေ </text>
<text sub="clublinks" start="155.533" dur="2.467"> ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ ၂၀ လို axolotls ကိုသိတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="158" dur="2.57"> ဒါပေမယ့်မင်းကဗြိတိသျှသခင်လိုမျိုးပါပဲ </text>
<text sub="clublinks" start="160.57" dur="2.33"> ဘယ်သူကသူ့ဇနီးကိုသတ်တာလဲ၊ </text>
<text sub="clublinks" start="162.9" dur="3.03"> သူသည်သြစတြေးလျတွင်နေထိုင်သည်ဟုယူဆရသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="165.93" dur="3.63"> ဒီတော့ Lord Lucan အာကာသယာဉ်မှူး၊ axolotls </text>
<text sub="clublinks" start="169.56" dur="2.13"> နှုတ်ခမ်းမွှေးပါသည့်မျက်နှာဆိုးဆံပင်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="171.69" dur="2"> fallopian ပြွန်များတွင်အရောင်များ၏ကွဲပြားမှု, </text>
<text sub="clublinks" start="173.69" dur="0.943"> နှင့်ရက်သတ္တပတ်၏ရက်ပေါင်း။ </text>
<text sub="clublinks" start="174.633" dur="2.347"> သူများသည်အချို့ Baller အကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="176.98" dur="2.153"> ပြီးတော့ဒါကအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="179.133" dur="1.637"> ဒါကပွဲချင်းပြီးလုပ်ထားတဲ့ရက်ပ်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="180.77" dur="1.711"> ဒါပေမယ့်ရေးထားတာမဟုတ်၊ ရေးထားတာလည်းမဟုတ်ပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="182.481" dur="1.299"> နောက်တဖန်မမြင်ရဖို့ဘယ်တော့မှမ။ </text>
<text sub="clublinks" start="183.78" dur="2.03"> စိတ်မပူပါနဲ့၊ shit လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး </text>
<text sub="clublinks" start="185.81" dur="1.38"> သင်ထင်လိမ့်မည် </text>
<text sub="clublinks" start="187.19" dur="2.66"> ငါ့သူငယ်ချင်းကိုရိုက်နှက်လိုက်တဲ့အတွက်ပျော်ရအောင်။ </text>
<text sub="clublinks" start="189.85" dur="2.833"> (ပရိသတ်ရွှင်လန်းမှု) </text>
<text sub="clublinks" start="194.134" dur="2.146"> ငါအတော်လေးအေးတဲ့ရက်ပ်ကိုရွေးလိုက်တယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="196.28" dur="1.1"> အရမ်းစောလွန်းပြပွဲ။ </text>
<text sub="clublinks" start="198.684" dur="2.25"> (ရက်ပ်ရိုက်) </text>
<text sub="clublinks" start="202.348" dur="1.866"> before တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောရက်ပ် </text>
<text sub="clublinks" start="204.214" dur="1.667"> the ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးနေ့သည်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="205.881" dur="1.886"> Norse ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Thor the Norse ဘုရားသခငျ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="207.767" dur="2.375"> ♪သူ့ကိုနာမည်ပေးပြီး say ငါပြောတယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="210.142" dur="2.039">aရက်စွဲတစ်ခုသို့ပြန်သွားပါ၊ Odin's day ရပြီ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="212.181" dur="1.062"> Wednesday ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ why </text>
<text sub="clublinks" start="213.243" dur="1.48"> elled စာလုံးပေါင်းဖော်ပြထားသည် so </text>
<text sub="clublinks" start="214.723" dur="2.546"> after လပြီးနောက်အမည်ရှိသောတနင်္လာနေ့သည်ကြီးမားသောအကွာအဝေး♪ </text>
<text sub="clublinks" start="217.269" dur="2.057"> ♪တနင်္ဂနွေနေရောင် </text>
<text sub="clublinks" start="219.326" dur="2.088"> Saturn ♪ဂြိုလ်ဂြိုဟ် Sat ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="221.414" dur="1.88"> Friday အင်း၊ ဒါပေမယ့်သောကြာနေ့ happened ဖြစ်ခဲ့တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="223.294" dur="2.597"> ♪ဒါကအကြမ်းဖက်မှုရဲ့နောက်ဘုရားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Freya ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="225.891" dur="2.83"> last နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းကဘာလဲ၊ ငါနှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="228.721" dur="2.411"> those ငါတို့အားလုံးပြုခဲ့ပါတယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="231.132" dur="1.964"> Norse သီတင်းပတ်၏နေ့ရက်များကိုရေတွက်နေသော Norse Valhalla ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="233.096" dur="0.833"> ♪ဒါက ၇ is </text>
<text sub="clublinks" start="233.929" dur="1.814"> ♪ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည်နေ့ရက်ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="235.743" dur="1.379"> ♪ငါမကိုင်နိုင်ဘူး♪ </text>
<text sub="clublinks" start="237.122" dur="2.658"> calendar ကျွန်ုပ်ပြက္ခဒိန်တွင်၎င်းကိုအမြဲတမ်းဖြတ်ကျော်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="239.78" dur="1.132"> ♪ငါမလိုချင်ဘူး♪ </text>
<text sub="clublinks" start="240.912" dur="3.028"> ♪အိုး၊ ကျွန်ုပ်အင်္ဂါနေ့၊ ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည် remember ငါ့ကိုလာခွင့်ပေးပါ </text>
<text sub="clublinks" start="243.94" dur="1.562"> ♪လက်တစ်ဖက်ကို sever ဖြတ်ပစ်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="245.502" dur="1.766"> ♪ဤအရာသည်ဘုရားသခင်ပြသခဲ့သည်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="247.268" dur="1.919"> ♪လူများကသူ့ကိုမေ့သွားကြသည် </text>
<text sub="clublinks" start="249.187" dur="1.135"> ♪ငါနင့်ကိုဆိ kid </text>
<text sub="clublinks" start="250.322" dur="2.684"> ♪ TYR သည် Tyr ၏နေ့ရက်ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="253.006" dur="2.162"> fun ပျော်စရာများစွာ ရှိ၍ လက်ကိုကိုင်။ ay ay ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="255.168" dur="1.32"> Norse ဘယ်သူကမှ Norse နတ်ဘုရားတွေကိုမကြိုက်ဘူး♪ </text>
<text sub="clublinks" start="256.488" dur="1.394"> ♪သို့သော်ထိုသို့မထူးဆန်း not </text>
<text sub="clublinks" start="257.882" dur="3.003"> ♪ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်သည်။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="260.885" dur="0.887"> ♪ငါ are ငုံ့ကြည့်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="261.772" dur="1.504"> ♪ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းခွံအနည်းငယ်ရရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="263.276" dur="2.728"> ♪ပြီးတော့ငါကလိင်အင်္ဂါတွေအထက်မှာထည့်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="266.004" dur="2.673"> the ငါဘက်လှည့်ကြည့်နေတယ်၊ ​​ဟုတ်တယ်ငါဒီကိုဖြတ်ကြည့်တယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="268.677" dur="2.645"> ♪၎င်းသည်သားအိမ်တွင်နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="271.322" dur="2.612"> the ငါဘက်ခြမ်းကိုကြည့်လိုက်တော့ငါအရမ်းပျော်တယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="273.934" dur="2.068"> egg ကြက်ဥကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့်အရာနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="276.002" dur="1.194"> the Ovary ထဲမှ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="277.196" dur="1.817"> ♪ဒါက fallopian tube ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="279.013" dur="2.691"> it ၎င်းအတွင်းထဲသို့ ၀ င်သွားသည့်အရာသေချာစေရန်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="281.704" dur="1.005"> think မင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="282.709" dur="2.371"> ♪ဒါတွေအားလုံးကယောနိဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး♪ငါထင်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="285.08" dur="0.833"> ♪အံ့သြစရာကောင်း♪ </text>
<text sub="clublinks" start="285.913" dur="1.936"> ♪အချို့သည်မှိုင်း။ အချို့မှာတောက်ပကြသည် </text>
<text sub="clublinks" start="287.849" dur="1.227"> ♪အချို့သည်ပန်းရောင် are ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="289.076" dur="1.463"> ♪အချို့သည်ခရမ်းရောင် are ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="290.539" dur="1.302"> ♪အချို့သည်မှိုင်းညို♪ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="291.841" dur="1.195"> ♪ဒါကတော်တော်နာပါတယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="293.036" dur="2.852"> your အကယ်၍ သင်၏ fallopians သည် beige-y ဖြစ်ပါက♪ </text>
<text sub="clublinks" start="295.888" dur="1.303"> hor စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ still နေဆဲ </text>
<text sub="clublinks" start="297.191" dur="1.405"> ♪သူတို့သည်ကလေးများမွေးစ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="298.596" dur="0.833"> right ဒါမှန်တယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="299.429" dur="1.916"> ♪ထိုအခါသင်သည်ထိုအရပ်မှသူတို့ကိုထုတ်တွန်း♪ </text>
<text sub="clublinks" start="301.345" dur="2.516"> the ကလေးမွေးဖွားသောအခါမျက်နှာဆံပင်မရှိ။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="303.861" dur="2.432"> did အကယ်၍ ထိုသို့ပြုပါကသင်သည်၎င်း၏မျက်နှာကိုရိတ်လိုက်လိမ့်မည်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="306.293" dur="2.627"> that နှုတ်ခမ်းမွှေးရှိကလေးငယ်တစ်နေရာ in </text>
<text sub="clublinks" start="308.92" dur="1.663"> the နှုတ်ခမ်း၊ အာခေါင်မှာ on </text>
<text sub="clublinks" start="310.583" dur="3.202"> ♪မင်းကဘယ်သူလဲ Whoa, မွေးကင်းစကလေး၊ ချွတ်ယူ၊ Bic နည်းနည်းယူပါ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="313.785" dur="0.978"> front ရှေ့မှောက်၌သင်တုန်း♪ </text>
<text sub="clublinks" start="314.763" dur="1.177"> lip နှုတ်ခမ်းကိုမခွဲမခွာ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="315.94" dur="1.395"> ♪ဟုတ်ကဲ့၊ </text>
<text sub="clublinks" start="317.335" dur="2.447"> ♪ကလေးကို Adolf Hitler ကဲ့သို့ made ငါဖန်တီးခဲ့♪ </text>
<text sub="clublinks" start="319.782" dur="1.7"> Hit ဟစ်တလာသည်နှုတ်ခမ်းမွှေးကိုအဘယ်ကြောင့်ရရှိခဲ့သနည်း။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="321.482" dur="1.401"> he သူငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာလား။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="322.883" dur="1.305"> ♪ဒီတစ်ခါလည်းဖြစ်ကောင်း♪ </text>
<text sub="clublinks" start="324.188" dur="1.215"> ♪ဟုတ်တယ် highly အလွန်အမင်းညှစ်ထားခံရသည် feel </text>
<text sub="clublinks" start="325.403" dur="2.859"> သခင်ယေရှုသည်ကလေးထိန်းကိုသတ်သောအခါပညတ်တရားမှထွက်ပြေးသောသခင်ကဲ့သို့ပင် running </text>
<text sub="clublinks" start="328.262" dur="2.631"> ♪ ah about about about about about about about about about me me you ♪♪ you about about♪ me about♪ about about about ♪♪ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့သိတယ်မင်းငါ့ကိုနားမလည်ဘူး♪ </text>
<text sub="clublinks" start="330.893" dur="2.472"> Luc Lord Lucan, ခိုးမှုမဟုတ်ဘဲ lootin '♪ </text>
<text sub="clublinks" start="333.365" dur="2.715"> ♪သူသည် Luton ထံမှရထားပေါ်တွင်ထွက်ပြေးခဲ့သည် </text>
<text sub="clublinks" start="336.08" dur="2.139"> ♪ဒါကလန်ဒန်အခြေစိုက်ဘူတာရုံတစ်ခု </text>
<text sub="clublinks" start="338.219" dur="1.598"> Cape Cape Canaveral သို့♪သွားခဲ့သည် </text>
<text sub="clublinks" start="339.817" dur="0.977"> ♪ဟုတ်တယ်၊ </text>
<text sub="clublinks" start="340.794" dur="1.263"> ♪တံခါးပေါက်မှတဆင့်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="342.057" dur="2.254"> n anny ဒီထိန်းကို glass ပြောပြီး glass သူမမျက်မှန်ခတ်လိုက်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="344.311" dur="2.495"> ♪ဒါကြောင့်ငါဒီမှာ NASA ဖို့စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="346.806" dur="2.516"> ♪ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော့်ကိုလွန်းပျံယာဉ်အာကာသထဲခေါ်သွား♪♪ </text>
<text sub="clublinks" start="349.322" dur="1.587"> because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ trouble ငါတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ် </text>
<text sub="clublinks" start="350.909" dur="1.563"> ♪ထိန်းသည်သွေးအိုင်ထဲ၌♪ရှိနေသည် </text>
<text sub="clublinks" start="352.472" dur="2.158"> ♪ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ငါ့သားအိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည် </text>
<text sub="clublinks" start="354.63" dur="1.586"> the ပြီးတော့၊ သခင်၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီထိန်းကိုသတ်ပစ်ရတာလဲလို့မေးလိုက်တယ် </text>
<text sub="clublinks" start="356.216" dur="1.265"> ♪ဒါပေမယ့်ငါသွားပြီ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="357.481" dur="2.995"> ♪ငါထွက်ပြေးသွားပြီး Lord အများကြီးက kiwi အဆိုတော်လို♪ </text>
<text sub="clublinks" start="360.476" dur="1.272"> space ယခုငါအာကာသထဲရောက်နေပြီ </text>
<text sub="clublinks" start="361.748" dur="2.221"> ♪ ကျေးဇူးပြု၍ အစားအစာအားလုံးကိုယူလာပြီး♪လာပေးပါ </text>
<text sub="clublinks" start="363.969" dur="2.592"> ♪ပြီးတော့ငါလိုအပ်တဲ့အာဟာရများကို ISS ဆီသို့♪ </text>
<text sub="clublinks" start="366.561" dur="2.873"> ♪ကျွန်ုပ်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလောဘကြောင့်ကျွန်ုပ်အားသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည် </text>
<text sub="clublinks" start="369.434" dur="1.294"> killed အသတ်ခံရရန်လိုအပ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="370.728" dur="2.61"> Lord ကျွန်ုပ်သည် Lord Damon Hill ကတည်းကအဆိုးဆုံးသခင်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="373.338" dur="1.228"> ♪သူသည်ပြိုင်ကားမောင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="374.566" dur="1.473"> he သူသည်သခင်ဖြစ်လာသည်ဟုမထင်ပါ။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="376.039" dur="1.546"> Alan Lord Alan Sugar ကပြောနိုင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="377.585" dur="1.373"> ♪ငါ adored ခံရလိမ့်မယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="378.958" dur="2.792"> this ဤအပိုင်းရှိယောက်ျားများမှမင်းထံမှနောက်ဆုံးဘာက♪? </text>
<text sub="clublinks" start="381.75" dur="2.653"> me ငါ့ကိုပြန်လှည့်စားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="384.403" dur="1.836"> ♪ရေပေါ်မှသေးငယ်သောအရာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ် see မြင်သည် </text>
<text sub="clublinks" start="386.239" dur="1.17">aမြွေကဲ့သို့ကြည့်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="387.409" dur="1.523"> ♪ဒါပေမယ့်ခြေထောက်သေးသေးလေးတွေရှိတယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="388.932" dur="1.894"> Mexico မက္ကဆီကိုမှကျွန်ုပ်ယူလိုသည်ကိုသင်သိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="390.826" dur="1.582"> export သူတို့တင်ပို့ဖို့တရားမဝင်ဘူး illegal </text>
<text sub="clublinks" start="392.408" dur="2.557"> I အကယ်၍ ရှာတွေ့လျှင်ကျွန်ုပ် fuckin လိမ့်မည် 'you သင်အစီရင်ခံပါ </text>
<text sub="clublinks" start="394.965" dur="1.539"> they're 'သူတို့အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ် ause </text>
<text sub="clublinks" start="396.504" dur="1.198"> ♪ငါအတော်လေးလိမ္မာသောခံစားရတယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="397.702" dur="2.824"> these ကျွန်ုပ်သည်ဤသေးငယ်သောသေးငယ်သောအရာငယ်များကိုသိသောကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိသည်ဟုခံစားမိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="400.526" dur="2.489"> ♪အချို့သည်အနက်ရောင်နှင့်အချို့သည်အဖြူရောင်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="403.015" dur="1.351"> ♪သူတို့မှာမျက်စိကန်းသောအမြင်ရှိသည် </text>
<text sub="clublinks" start="404.366" dur="1.454"> night ညသန်းခေါင်ယံ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="405.82" dur="1.194"> ♪သူတို့သည်ငါးနှင့်မတူ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="407.014" dur="1.733"> ♪သို့သော်၎င်းတို့သည်ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများနှင့်မတူပါ။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="408.747" dur="2.559"> g ဟုတ်တယ်၊ ပါးဟက်လေးများနှင့်သူတို့၏ခြေလက်များကိုကြည့်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="411.306" dur="1.882"> ♪သူတို့က feathery red ပုံစံမျိုး </text>
<text sub="clublinks" start="413.188" dur="1.336"> they သူတို့မှာ Quills နည်းနည်းလေးနဲ့တူတယ်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="414.524" dur="1.309"> their သူတို့ခေါင်းပေါ်မှာ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="415.833" dur="3.206">aကျွန်ုပ်သည်အပြုံးတစ်ခု (ကလေးကိုသိသာထင်ရှားစွာရည်ညွှန်းလိုသော) ဖြစ်သည့်အခါကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်အရမ်းကြိုက်ရတာလဲ like </text>
<text sub="clublinks" start="419.039" dur="1.667"> ♪ငါ axolotls ကိုတကယ်ချစ်ပါတယ် ye </text>
<text sub="clublinks" start="420.706" dur="1.268"> the ကလေးအားကြည့်ရှုပါ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြုံးသင့်သည်။ ♪) </text>
<text sub="clublinks" start="421.974" dur="2.247"> ♪သူတို့သည် quokka ကဲ့သို့အမြဲပြုံးနေကြသည် </text>
<text sub="clublinks" start="424.221" dur="2.424"> ♪ဒါဆိုငါပုလင်းနှင့်အတူမက္ကဆီကိုကိုသွားမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="426.645" dur="2.729"> ♪ကျွန်ုပ်ဂူသို့လမ်းလျှောက်သွားပြီး in တွင်စမ်းကြည့်ပါ </text>
<text sub="clublinks" start="429.374" dur="3.139"> ♪ပြောပါ၊ axolotl နည်းနည်းလေးသာပြောလိုက်ပါ။ in </text>
<text sub="clublinks" start="432.513" dur="2.66"> ♪ပြီးတော့ရေကူးမယ် </text>
<text sub="clublinks" start="435.173" dur="2.629"> then ပြီးတော့ငါတိုင်းပြည်ထဲကပို့။ ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="437.802" dur="1.447">bကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းထဲတွင်မည်သို့ထည့်ထားသနည်း </text>
<text sub="clublinks" start="439.249" dur="1.549"> security လုံခြုံရေးမှတစ်ဆင့် w ၀ တ်စားဆင်ယင်♪ </text>
<text sub="clublinks" start="440.798" dur="2.062"> it အဲဒါကိုပြန်ယူပါ </text>
<text sub="clublinks" start="442.86" dur="1.059"> ♪ဒါကငါ့ကိုကြည့်တာ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="443.919" dur="0.905"> ♪ငါခေါင်းကိုပတ်လိုက်တာ♪ </text>
<text sub="clublinks" start="444.824" dur="1.343"> great မင်းပြောတာကမင်းကြီးတယ် great </text>
<text sub="clublinks" start="446.167" dur="2.556"> then ပြီးတော့ငါအကောင်းဆုံးကြင်ဖော် - Lord Lucan round ပတ်ပတ်လည်ကိုဖိတ်ခေါ်မယ် </text>
<text sub="clublinks" start="448.723" dur="0.833"> ♪အဲဒီမှာမင်း go သွားပါ </text>
<text sub="clublinks" start="449.556" dur="0.894"> ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ </text>
<text sub="clublinks" start="450.45" dur="2.15"> playlists နှင့်ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။ </text>
<text sub="clublinks" start="452.6" dur="1.09"> ဒီမှာယူပါ </text>
<text sub="clublinks" start="453.69" dur="1.638"> လိုပဲမှတ်ချက်ပေးသူအပေါငျးတို့အမှုအရာ။ </text>
<text sub="clublinks" start="455.328" dur="1.172"> အော်ကြပြီ! </text>